AGD Bank နဲ့ ကားအရောင်းစင်တာများချိတ်ဆက်| Hire Purchase ၀ယ်ယူနိုင် | MyanmarCarsDB - No 1 Car Marketplace/Classifieds Website in Myanmar
Used Cars (1306)	Sedan (375)
Home » News » AGD Bank နဲ့ ကားအရောင်းစင်တာများချိတ်ဆက်| Hire Purchase ၀ယ်ယူနိုင်
admin | News | August 13, 2012
MyanmarCarsDB – Yangon – 13 August 2012
ဖုန်း – ၆၁၃၆၂၁၊ ၆၁၇၁၀၁၊ ၀၉-၅၅၀၅၈၆၂
– MyanmarCarsDB Editor
4,181 total views,3today Print
16 Responses to “AGD Bank နဲ့ ကားအရောင်းစင်တာများချိတ်ဆက်| Hire Purchase ၀ယ်ယူနိုင်”
Thet Tun Paing on August 13, 2012 @ 1:13 pm ဟုတ်ကဲ. ဒီ အရစ်ကျ ငွေခြေမှုစနစ်ကို လေ.လာဘူးပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားလို.ပါ။ သူ.ရဲ. လင်.မှာ အာမခံ ဆိုတာနဲ.ပတ်သတ်ပြီး အသေးစိတ်မရေးထားပါဘူး။ တကယ်တော.အရေးအကြီးဆုံးကအဲဒိအချက်ပါ။ ၀ယ်မဲ.သူကို အာမခံပေးဘို.လူလိုပါတယ်။ အာမခံမဲ.သူဟာ အကောင်.ဖွင်.ထားပြီး ၀ယ်ယူမဲ. ကားအတွက် ၈၀% ကို ပုံသေထားရပါမယ်။ အကြွေးမကျေမချင်း ထုတ်ယူလို.မရပါဘူး။ တကယ်လို. အာမခံ ပေးမဲ.လူမရှိရင်လဲရပါတယ်။ မိမိ ဘာသာ ၈၀% ကို အာမခံထားပါ။ ကြွေးကျေ ရင်ပြန်ထုတ်လို.ရပါမယ်။ ဒါ.အပြင် ၂၀% ကို လက်ငင်းပေးချေ ရပါမယ်။ မပြီးသေးပါဘူး ၀န်ဆောင်ခနဲ. အတိုး ၇+၁ = ၈% ကိုလဲ အစထဲကသွင်းရပါမယ်။.
ဒီတော. ၀ယ်ချင်တဲ.လူဟာ ၈၀% + ၂၀ % + ၈%=၁၀၈% ကို အရင်ရှာထားရပါမယ်။ သူတို.ကတော. ၈၀% က နောက်ပြန်ရမှာပါလို. ရှုင်းပြပါတယ်။ ဒါပေမဲ.အရင်ဆုံးတော. Bank deposit (အာမခံ) အနေနဲ.သွင်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော.မှ ၈၀% ကို ၁ နှစ်ဆပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။.
အတိုဆုံးပြောရရင်တော. ခင်များ သိန်းတစ်ရာတန် ကို အရစ်ကျစနစ်နဲ. ၀ယ်ခြင်ရင် ၁၀၈သိန်းရှာထားပါ။ ဒါဆို သက်သက်သာသာအရစ်ကျစနစ်နဲ.၀ယ်လို.ရပါပြီ။.
Reply Hlafamily Mawgyun on August 13, 2012 @ 3:11 pm စောက်ရူးလားခင်ဗျာ(၁၀၈)သိန်းတစ်ထဲ၊ထဲ့နိူင်မှတော့အလုပ်ရှုပ်ခံပြီးအရစ်ကျဝယ်မလားလက်ငင်းပေးဝယ်လိုက်တော့မပေါ့
Reply Aung Myint Myat on August 14, 2012 @ 1:50 am အေးကွာဘယ်လိုလုပ်ပြီး စဉ်းစားနေကြလဲ….
Reply Myint Swe on August 14, 2012 @ 7:39 am ဒီစနစ်သည်အရစ်ကျစနစ်မဟုတ်ပါဘူး
Reply Kyaw Si Thu on August 14, 2012 @ 7:58 am So bad system. Dont buy. Only mad boy will use this hp
Reply Hein Myint Aung on August 14, 2012 @ 4:55 pm so so bad! stupid,,,,,,
Reply Nay Soe on August 16, 2012 @ 9:41 am အာမခံ မရှိပေမယ့် ကား owner book ကို ပိုက်ဆံမပြေမချင်း သိမ်းထားလို.ရပါတယ်ဗျာ… ကိုယ်ဖက်က အပိုင်ချည်ပြီး တုပ်ပြီး မလုပ်ပါနဲ.. စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ စွန်.စားရတယ်ဗျ…။ စီးပွားရေးသမား မပီသသေးပါဘူး…။.
Reply Kyaw Win Htut on August 16, 2012 @ 3:25 pm မှတ်ချက် ဥာဏ်နည်းသူများကိုသာ ရောင်းမည် ။ Reply Ye Win on August 16, 2012 @ 6:26 pm ဥာဏ်လုံးဝမရှိတဲ့ သူကျတော့ အလကားပေးမှာလား..
Reply Htut Myo on August 21, 2012 @ 2:47 pm သူများနိုင်ငံမှာကားဝယ်လျှင်၉နှစ်အရစ်ကျပေးချေရပါသည်.၁၀%သာအရင်ပေးရပါသည်…မြန်မာဘဏ်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များတော်တော်အပါသည်…လုံးဝမဝယ်ပါနှင့်..p
Reply Chit Ko on August 21, 2012 @ 3:25 pm ၁၀၀ကျော်ရှိမှတော့ အရစ်ကျမ၀ယ်ဘူး
Reply Htetar Kar on August 23, 2012 @ 10:34 pmိသိန်းတစ်ရာ ( ၁၀၀ )တန် ကားတစ်စီးလိုချင်ရင် တစ်ရာရှစ် ( ၁၀၈ )သိန်း ကြိုရှာ ထားရမှာဆိုတော ဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့် မဆိုးဘူးပဲ နော်ကတော့ ၀ယ်မှာဘဲ..နိုင်ငံတော်က AGD ကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကူညီပေးထားဖူးလို့ AGD ကလည်း ကျေးဇူးပြုတဲ့ အနေနဲ့ ပြည်သူတွေကို သက်သက်သာသာနဲ့ ကူညီနေတာကို အထင်လွဲကျနဲ့လေ နော်ကတော့ ၀ယ်မှာနော်….တားနဲ့း……………..
Reply win naing on September 5, 2012 @ 10:05 pm ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ HP မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန် HP လား? အောင်မြင်မယ်မထင်။
Reply Paing Thet on September 6, 2012 @ 8:17 am သိပ် အလိုက်ကြီးလဲ မလုပ်ကြပါနဲ. ကျတော်.ကို AGD က အမြင်ကပ် ပြီး အရစ်ကျ ရောင်းတာမှာ Black list လုပ်နေပါအုံးမယ်။ သူ.ရဲ. FB မှာ ခု အာမခဲစနစ်ကို ပြောင်းလိုက်တာတွေ.ရပါတယ်။ ကျတော်တော. သေခြာ မလေ.လာရသေးပါ။ သွားကြည်.လိုက်ကြပါအုံး ။https://www.facebook.com/#!/notes/agd-bank-%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%99%E1%82%88%E1%80%96%E1%80%BC%E1%80%B6%E1%82%95%E1%81%BF%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%B3%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%B8%E1%80%98%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AE%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%80%E1%80%B9/%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%B8-%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9D%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%9A%E1%80%B0%E1%80%BB%E1%80%81%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8-%E1%80%A1%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%80%E1%80%B9-%E1%80%85%E1%80%94%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%85%E1%80%B9/457930127561720.
Reply Zin Linnhtet on October 5, 2012 @ 7:10 am အကိုတို့ ကျနော် လဲ အရစ်ကျနဲ့ ၀ယ်ချင်လို့ ဘယ်လို လုပ်ရ မလဲ အသေးစိတ် သိချင်လို့ ဘယမှာမေးလို့ရ မလဲ ခဗျ.
Toyota Hilux Surf	mitsubushi lancer evolution 8, 2000cc	Good Morning Everyone	price of 1300cc car	honda Insight	ယနေ့ လူကြည့်အများဆုံး ကားများRAV4(DIESEL INTERCOOLER TURBO) (25 views)toyota bB (24 views)mark2(19 views)mark II (92 ကြောင်မျက်လုံး) (13 views)Toyota mark22002 (13 views)COROLLA VAN (10 views)D MAX (Double Cub) (9 views)Nissan Skyline r324door (8 views)NISSAN AD VAN - VE အပြီးစီး ၁ဝ၅သိန်း (8 views)BELTA ( XL ) (7 views) © 2013 MyanmarCarsDB – No 1 Car Marketplace/Classifieds Website in Myanmar. All Rights Reserved.